Dacwadda ku saabsan Qadaafi ee loo heysto madaxweynihii hore ee Fransiiska | Somalia News
Dacwadda ku saabsan Qadaafi ee loo heysto madaxweynihii hore ee Fransiiska
Maxkamad ku taalla waddanka Faransiiska ayaa ku gacan seyrtay codsi uga yimid madaxweynihii hore ee waddankaas Nicolas Sarkozy, oo ka dalbaday in la burburiyo baadhitaan ku saabsan eedeymo loogu jeediyay inuu lacago laaluush ah ka qaatay dalka Liibiya.
Sarkozy ayaa wajahaya dacwad la xidhiidha inuu hoggaamiyihii hore ee Liibiya, Mucamar Al Qadaafi, ka helay garab caawinaad ah oo uu ku maareynayay ololihii doorashada ee uu galayay sanadkii 2007-dii.
Xukunka kasoo baxay amxkamadda racfaanka ee magaalada Paris ayaa ka dhigan in Mr Sarkozy iyo dad kale oo ka tirsanaa maamulkiisa ay la kulmi karaan maxkamadeyn.
Hase yeeshee, eedeysaneyaasha ayaa wali heysta fursad ay racfaan uga qaataan maxkamadda ugu sarreysa Faransiiska.
Mr Sarkozy ayaa markii ugu horreysay ee eedeynta loo jeediyay sheegay inaysan wax sal iyo raad ah lahayn.
“Waxaa la igu eedeeyay arrin aan lahayn caddeyn muuqata,” ayuu yidhi Sarkozy, oo la hadlayay garsooraha maxkamadda, sida uu qoray wargeyska Le Figaro.
Muxuu ku saabsan yahay Kiiska Libya?
Sanadkii 2013-kii, Faransiiska ayaa furay baadhitaan ka dhan ah ololihii doorashada ee Mr Sarkozy, kaddib markii ay soo baxeen warar sheegaya inuu ka faa’iideystay lacago malaayiin euro ah oo si sharci darro ah looga qaatay Qadaafi.
Wuxuu ku hungoobay ujeeddadiisuu ahayd in mar kale xilka madaxweynaha loo doorto sanadkii 2012-kii. Markaas waxaa doorashada uga adkaaday François Hollande.
Eedeymahan markii ugu horreysay waxaa shaaciyay ganacsadaha Faransiiska ah, balse asal ahaan kasoo jeeda Lubnaan ee lagu magacaabo Ziad Takieddine, iyadoo ay u markhaati fureen qaar ka mid ah saraakiishii xukuumaddii Qadaafi.
Bishii November ee sanadkii 2016-kii, Mr Takieddine ayaa warbaahinta Faransiiska u sheegay in muddadii u dhaxeysay 2006 ilaa 2007 uu lacago ku wareejiyay Mr Sarkozy iyo Claude Guéant, oo ahaa madixiisii golaha Wasiirrada.
Mr Takieddine wuxuu sheegay in lacagtaas ay ka timid Qadaafi, isku darkeedana uu ahaa €5m (£4.4m; $6.2m).
Xilligaas wixii ka dambeeyay waxaa socday baadhitaanka la xidhiidha arrintan.
This post first appeared on BBC Somali - Somali. Read the http://www.bbc.com/somali/war-54285728original article
Previous articleSuspected extremists abduct 3 non-Muslims in Kenya's north – MyMotherLode.com
Next articleDaawo:-Liis ay ku qoran yihiin Xubnaha Wasiirada Cusub oo loo gudbiyay Ra’isul Wasaaraha & Cabsi laga qabo Ansixinta …